‘मि टु’ काे कठघरामा पूर्वमन्त्री स्थापित, यस्ता छन् उनीमाथि लागेका अाराेप ! – Everest Dainik – News from Nepal
‘मि टु’ काे कठघरामा पूर्वमन्त्री स्थापित, यस्ता छन् उनीमाथि लागेका अाराेप !
सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अभियान ‘मि टु’ का क्रममा भारतका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको नाम मुछिने क्रम जारी छ ।
बलिउडमा तहल्का मच्चाएको मि टुको समर्थनमा केही साताअघि नेपाली महिला पत्रकारुहरुले पनि आफू विरुद्ध भएको यौन हिंसाका बारे बोले । विश्वभरि फैलिदै गएको मि टु मुभमेन्टले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा नि प्रवेश पाएको छ ।
शिव प्रकाशले तत्कालिन काठमाडौं महानगरपलिकाको मेयर तथा हालका प्रदेश नम्बर ३ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितमाथि आरोप लगाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो हत्या गर्नेसम्मको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ‘आज मुख खोलें, यी दुष्टले मेरो हत्या गराउने प्रयास गरेका थिए । म खेलकुद परिषद्को प्रचार प्रसार विभागमा रहँदा स्थापित सदस्य सचिव भएर आए । दुर्इ कुरामा यिनले मलार्इ तँगारो देखे । एक थियो, राजनीतिक विचार । म प्रजातान्त्रिक थिएँ । प्रजातान्त्रको पुनस्थार्पना पछि खेलकुद परिषाद्को कर्मचारी संघ पनि स्थापना गरेको थिएँ । उनले मलार्इ तँगारो देखे । रक्सी र आइमाइका भोगी केशव स्थापितले राखेप कार्यालयभित्रै गुण्डा प्रयोग गरेर ममाथि आक्रमण गराए ।’ गुण्डा कताबाट आए थाहा भएन ।
एक्कासी चार–पाँच जना गुण्डाले मध्य दिउँसो फिल्मी शैलीमा कार्यालयमै आक्रमण गरेर गए । गेटमा चौविस घण्टा पहरा थियो । परिषद् ओरिपरि सुरक्षा गार्ड हुन्थे तर ती सबै गुण्डाका लागि स्वर्गद्वार बने । म रगताम्य भएँ, लडे । केहि मित्रले एम्बुलेन्स राखेर अस्पताल लगे । एक हप्ताभन्दा बढीको उपचार पछि घर फर्किएँ । घर फर्किँदा जागिरबाट बर्खास्त गरिएको पत्र पाएँ । यी दुष्टले मलार्इ मार्न खोजेका थिए, म बाँचे ।’
‘नेपाल खेलकुद पत्रकार संघले त यो आक्रमणको घाेत्र भत्सर्ना गर्दै ११ दिनसम्म सम्पूर्ण खेलकुद समाचार बहिस्कार गर्ने निर्णय लियो । गोरखापत्रदेखि कान्तिपुरलगायत सम्पूर्ण पत्रपत्रिकाले सम्पूर्ण पत्रपत्रिकाले खेलकुद समाचार बहिस्कार गरे, दोषिमाथि कारबाहिको माग गरे । तर सर्वेसर्वा सदस्य(सचिव केशव स्थापितले एउटा सानो ‘इक्वाइरी’ समेत गर्ने आदेश प्रशासनलार्इ दिएनन् । उल्टो मलार्इ जागिरबाट बर्खास्त गरेर तँगारो हटाए भन्ठाने, यी अपराधीले । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक खेलकुद समाचार ‘ब्ल्याकआउट’ भयो । संकटको बेला साथ दिने पत्रकार मित्र र सञ्चार माध्ययमलार्इ सदैव सादर धन्यवाद । ‘मि टू’
त्यस्तै पत्रकार रश्मिला प्रजापतीले स्थापितले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन् । १५ वर्ष अघि भएको उक्त ह्यारेसमेन्टबारे उनले यसअघि पनि विभिन्न मिडियालाई बताएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनलाई प्रदेश ३ का भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवं काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व मेयर केशव स्थापितले ह्यारेस गरेको बारे लेखिन् । केशवले अहिले पनि अन्य पत्रकारलाई पनि ह्यारेस गरेको कुरा उनले दावी गरेकी छिन् ।
साथै उनले आफू स्थापितबाट यौन हिंसामा परेको विषय यसअघि नै लेखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उनको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा जागिर गुमाएको पनि लेखेकी थिएँ ।’
ट्याग्स: Kathmandu, Keshab Sthapit